AmaBuddhist Nuns - Ubomi Babo Nendima
Emuva ngo-2011, ubuntu be-Fox News uGretchen Carlson wabalisa ukumangaliswa ukuba imbumbulu yamaBuddha yayifakwe kwinkonzo yesikhumbuzo kaSeptemba 11 eWashington, DC.
"Kuya kuba nomthandazo wokukhonza iintlanga kuzo zonke iicawa," kusho uCarlson. "Siya kuba ne-Buddhist nun, esingazange sazi nokuba ikhona." Omunye ubuntu beFox, uBrian Kilmeade, wongezelela, "Ndicinga ukuba unokufanisana nawo onke amaninzi eBuddhist ezweni lethu kwifowuni yefowuni."
Andizi ukuba bangaphi abancinci bamaBuddha baseMerika, ningalokothi nikhumbule ihlabathi, kodwa ukuba bavumelane nabo bonke ndiyicinga ukuba sidinga idibanisa enkulu yefowuni.
Yintoni i-Nun buddhist?
EmaNtshona, izindwendwe zaseBuddhist azihlali zibiza ngokuthi "izindunduma," zikhetha ukuzibiza ngokuthi "i-monastics" okanye "ootitshala." Kodwa "i-nun" ingasebenza. Igama lesiNgesi elithi "nun" livela kwi-Old English nunne , enokuthi ibhekise kumfundisikazi okanye nayiphi na ibhinqa ehlala phantsi kwezithembiso zezenkolo.
Igama lesiSanskrit labesifazane beBuddhist be-monastics yi- bhiksuni kunye ne-Pali yi- bhikkhuni . Ndiya kuhamba ne-Pali apha, ebizwa ngokuba yi- BI -koo-nee, igxininise kwisixhobo sokuqala. I "i" kwisilayidi yokuqala ivakala ngathi "i" kwisicatshulwa okanye ikhutshwe .
Inendima ye-nun eBuddhism ayifani ngokufanayo nendima yesununu ebuKristwini. NgokomKristu, umzekelo, i-monastics ayifani nababingeleli (nangona enye ingabakho bobabini), kodwa ngeBuddha akukho nto ikhoyo phakathi kwama-monastics nabapristi.
I-bhikkhuni egciniweyo iyakwazi ukufundisa, ukushumayela, ukwenza amasiko, nokusekela kwimibhiyozo, njengowesilisa kunye naye, i- bhikkhu (uBuddhist monk) .
Oku akuthethi ukuba i-bhikkhunis iye yanandipha ukulingana ne-bhikkhus. A bazange.
Ngokweziko zobuBuddha, i-bhikkuni yokuqala yayiyinina kaBuddha, i- Pajapati , ngamanye amaxesha kuthiwa yiMahapajapati.
Ngokwe- Pali Tipitaka , uBuddha waqala ukungafuni ukumisela abafazi, kwaye waphinde wabuya (emva kokuncenga u- Ananda ), kodwa wachaza ukuba ukufakwa kwabasetyhini kuya kubangela ukuba i-dharma ikhohliwe kungekudala.
Nangona kunjalo, abaphengululi baphawula ukuba ibali kwiiSanskrit nelaseTshayina ezibhalwe ngolu hlobo olubhaliweyo alitsho lutho malunga nokunyaniseka kukaBuddha okanye ukungenelela kuka-Ananda, okukhokelela abanye ukugqitywa kweli bali longezwe kwizibhalo ze-Pali emva koko, ngumhleli ongaziwayo.
Imithetho kaBuddha yemithetho ye-monastic ibhalwe kwitekisi ebizwa ngokuthi yiVinaya . I-Pali Vinaya inemithetho emibini malunga ne-bhikkunis njengokuba ibhikkus. Ngokukodwa, kukho imithetho eyisibhozo ebizwa ngokuthi yiGarhamhammas, eqinisweni, yenza yonke ibhikkunis ibe phantsi kwayo yonke ibhikkus (jonga "i -First Buddhist Nuns "). Kodwa, kwakhona, i-Garudhammas ayifumaneki kwiinguqulelo ezifanayo ezigcinwe kwiSanskrit neTshayina.
Kwiindawo ezininzi zase-Asiya abafazi abavumelekanga ukuba bamiselwe ngokupheleleyo. Isizathu-okanye isizathu-kuba oku kuhambelana nenkokheli yesizukulwana. Umbhali waseBuddha wachaza ukuba i-bhikkhus egciniweyo kufuneka ibe khona kwi-bhikkhus kwaye i-bhikkhus ibekwe ngokugcwele kunye ne- bhikkhunis ekhoyo kwi-bhikkhunis.
Xa senziwa, oku kuya kudala umda ongenakulinganiswa wezolawulo ezibuyela kuBuddha.
Kukho iingcamango ezine ezineembambano zomshuwalense we-bhikkhu ohlala ungaphazamiseki, kwaye le miqolo iphila kwiindawo ezininzi zase-Asia. Kodwa ngenxa yebhikkhunis kukho umda owodwa ongaphazamiseki, ohlala eChina naseTaiwan.
Inzala yeTheravada bhikkhunis yafa ngo-456 CE, kwaye i- Theravada Buddhism yindlela ebalulekileyo yeBuddha eningizimu-mpuma ye-Asia-ngakumbi, eBurma , eLosos, eCambodia, eThailand naseSri Lanka . Lawa onke amazwe anamaqhawe angamaqhawe angamadoda angama-monastic, kodwa abafazi banokuphela nje, kwaye eThailand, akunjalo. Abasetyhini abazama ukuhlala njengeBhikkunis bafumana inkxaso engaphezulu kwezemali kwaye ngokuphindaphindiweyo kulindeleke ukuba bapheke kwaye bahlambulule i-bhikkhus.
Iinzame zamva nje zokumisela abafazi baseTravada - ngamanye amaxesha nge-bhankunis yaseTshayina ababolekeleyo - baye bafumana impumelelo eSri Lanka.
Kodwa eThailand naseBurma nayiphi na inzame yokumisela abafazi inqatshelwe yiintloko zee-bhikkhu.
UbuBuddhism baseTibetan bunenkinga yokungalingani, kuba iinqununu zeBhikkhuni azizange zenzeke kwiTibet. Kodwa amabhinqa aseTibet ahlala njengamantombazana ngokulungiswa ngokukhethekileyo ngeenkulungwane. Ubungcwele bakhe i-Dalai Lama ithetha ngokuvumela abafazi ukuba babe nokulungelelaniswa ngokupheleleyo, kodwa akanalo igunya lokwenza isigqibo esisigxina kunye naloo nto kwaye kufuneka akhombise ezinye i-lamas eziphezulu ukuba zivumele.
Ngaphandle kwemithetho yoobukhokheli kunye neentlanzi abafazi abafuna ukuhlala njengabafundi bakaBuddha abazange bahlale bekhuthazwa okanye baxhaswa. Kodwa kukho abanye abaye banqoba ubunzima. Ngokomzekelo, isiko lesiTshayina (iZen) sikhumbula abafazi ababa ngabaphathi abahlonishwa ngamadoda kunye nabasetyhini (bona " Abafazi be-Women's Ancestors of Zen ").
Bhikkuni ya namhlanje
Namhlanje, isiko le-bhikkhuni likhula kwiindawo zaseAsia, ubuncinane. Ngokomzekelo, omnye wamaBuddha ahloniphekileyo kwihlabathi namhlanje yi-bhikkuni yaseTaiwan, uDharma Master Cheng Yen, owasungula intlangano yamazwe ngamazwe ebizwa ngokuba yiTzu Chi Foundation. Indoda yaseNepal egama linguAni Choying Drolma iye yasungula isiseko nesikolo senhlalakahle ukuxhasa oodade bayo.
Njengoko imiyalelo yesiganeko esasasazeka eNtshonalanga kukho iinzame zokulingana. I-Monastic Zen eNtshonalanga idla ngokubambisana, kunye namadoda nabasetyhini abahlala ngokulingana kwaye bazibiza ngokuthi "i-monastics" endaweni ye-monk okanye i-nun. Ezinye i-scandals zobulili ezihlazileyo zibonisa ukuba le ngcamango ingafuna umsebenzi othile.
Kodwa kukho inani elinyukayo lamaziko e-Zen kunye neendwendwe eziphantsi kweenkokheli eziphethwe ngabasetyhini, ezinokuba neziphumo ezinomdla ekuphuhlisweni kwentshona yeZen.
Enyanisweni, esinye sezipho ezisentshonalanga ye-bhikkunis singanika oodade babo baseAsia ngolunye usuku umthamo omkhulu wesifazana.
I-Essence ye-Heart Sutra
Mata Jito Ji (Ajit Kaur) Umfazi wokuqala we Guru Gobind Singh
Ngaba uYesu Wabethelelwa NgoLwesihlanu?
I-6 Dalai Lama
Yama - I-Buddhist Icon yeGehena kunye ne-Impermanence
UJohn Dillinger - Isitha sikaRhulumente No. 1
I-French Subjunctive - Le Subjonctif - iMithetho kunye nemizekelo
I-De-Wintering Your Boat for Spring
Buyela kwiiNgcebiso zeSikolo kootitshala
IsiJamani kwaBaqali: Iigama kunye neAlfabhethi
UJohn Alexander Reina Newlands
Ngaphambi kokuba Uthenge iiKlabhu zeGolf ezintsha
I-Eileen Grey, i-Nonconformist Designer kunye noMcwangcisi
Ukuhlonipha iMida yeMicandelo
Yonke Ngokuphathelele Umzobo wokuKhutshwa koMoya
I-St. John Fisher College Admissions
'Abahlobo': Yithini Le ntetho yesiFrentshi?
Ukucula iingoma ezidala: i-Traditional and Literary Ballads
EziPhambili zePhysical Physical Constants
Iinyanga zoMthi weCelt